Fankalazana ny faha- 50 taonan’ny FJKM : Tsy nanatrika ny fiaraha-misakafo ny filohan’ny fankalazana -
AccueilRaharaham-pirenenaFankalazana ny faha- 50 taonan’ny FJKM : Tsy nanatrika ny fiaraha-misakafo ny filohan’ny fankalazana
21/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Lany tamin’ny zaikaben’ny FJKM tany Antsirabe farany teo fa i Ravalomanana Marc no filohan’ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, ary izy noho izany no mikaraka sy mandrindra ny hetsika rehetra. Noho izany dia tokony ho hita amin’ny hetsika rehetra izay miseho sy mitranga ny olona izay voafidy ho filoha sady mpitarika ny hetsika izay nahalany azy . Ny nahagaga anefa taorian’ny fotoam-pivavahana lehibe izay notanterahina omaly tany Antsiranana , dia nisy ny fiaraha-misakafo na ny nofon-kena mitam-pihavanana nahitana ireo tompon’andraikitra maro samihafa teo anivon’ny FJKM ary natrehan’ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina izany. Ny nahagaga anefa dia tsy tazana nanotrona tao ny filohan’ny fankalazana izay tokony ho nomena voninahitra noho ny fahatontosan’ny fankalazana , dia i Ravalomanana izany . Samy nanontany tena tokoa ny rehetra hoe nankaiza ny filohan’ny fankalazana Ravalomanana Marc no tsy niara-nisakafo tamin’ireo tompon’andraikitra , satria dia fiaraha-misakafon’ ny mpianakavin’ny finoana no atrehina.
Mahasanganehana ihany na dia any amin’ny hetsika ara-pinoana tahaka izao aza mbola hampidirana politika, tsiahivina fa hetsiky ny FJKM no notanterahina tany Antsiranana ary mitovy finoana ny rehetra nanatrika izany. Indrisy anefa fa dia mbola hita eny ihany ny lolom-po sy ny fankahalana ataon- dRavalomanana Marc na dia nanankinana andraikitra goavana aza ny tenany, ary tokony ho fitaratra hatrany eo imason’ ireo mpino kristianina FJKM izay tonga nanome voninahitra ny lanonana tany an-toerana. Fankahalana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ve no antony tsy nahatonga azy teo amin’ny sakafom-piraisaina, aiza ny tenin’Andriamanitra izay notovozina nandritra ny fankalazana sa natao hohenoina fotsiny ihany izany. Hampianatra ny olona hankahala olona ve ity fihetsika tian-dRavalomanana hatao sy aseho ity, indrindra fotoana kristianina no resahina. Raha toa tokoa mantsy ka olona maloto fo no hitarika izany fankalazana izany, satria dia ny fampiraisana ny mpino hatrany no tanjona ka aleo mametra-pialana satria dia mandoto fiangonana ny fihetsika tahaka izao.
Adidy ny mifidy, ka tokony hefaina. Izahay manokana dia mampirisika ny vahoaka malagasy havitrika amin’izany satria adidy izany, hoy ny minisitra Neypatraiky Rakotomamonjy. “ Hiatrika fifidianana filoham-pirenena isika amin’ity taona ity, ampirisihina isika vahoaka mba ...Tohiny